I-CURB INYUSWE VS UKUKHANYA KWESIBHAKABHAKA ESIBHAKABHAKENI - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi I-Curb inyuswe vs ukukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni
Nasi isikhokelo sethu sokunqanda ukukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni esibhakabhakeni kubandakanya umahluko phakathi kweentlobo zombini, ezona zilungileyo kunye neendlela zokuyila. Ukongeza ukukhanya kwesibhakabhaka ukongeza ukukhanya kwendalo, ukongeza umoya ongenisa umoya nokwenza igumbi liziva likhulu. Izibane zelanga zilungile xa zisetyenziswa kwimimandla ebandayo njengoko zivumela ukukhanya kwelanga ebusika kuncede ukufudumeza indawo.
Kwiindawo ezifudumeleyo isibhakabhaka esikhanyayo sinokuvulwa ukuze kungeniswe ukukhanya kwelanga kwendalo kwaye kuqokelele impepho okanye umoya omtsha. Izibane zesibhakabhaka zilungile kwiindawo ezingenakufumana ukukhanya kwiindonga zangaphandle, ngakumbi kwiindawo ezinkulu okanye ezivenkileni.
Xa zisetyenziswa emakhayeni, zinokubakho embindini wekhaya apho iindonga ezingaphandle zingenakho ukuba neefestile, okanye nokuba nje ukongeza isiqwenga esipholileyo ekhaya.
Yintoni iDekk vs Curb Mounted Skylight?
Ukunqanda ukukhanya kwesibane esibhakabhakeni
Idisk yokunyuka kwesibhakabhaka
Yeyiphi i-Curb engcono okanye i-Deck Mounted Skylights?
Umahluko omkhulu phakathi kwedesika kunye nokunqanda ukukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni kukunyuka okuchaphazela ukubonakala kwayo. Isibhakabhaka esibekwe phezulu esibhakabhakeni sinika ucoceko, ujongo oluqinileyo ngelixa uthambiso luthanda ukuba lincinci.
Ukukhanya kwesibhakabhaka esikhanyisiweyo kunamandla amancinci kunombane ophakanyiswe phezulu, kodwa isibhakabhaka esibhakabhakeni sineendleko eziphantsi kwaye kulula nokutshintsha. Funda ngakumbi malunga ukulunga kwesibhakabhaka kunye neengozi kweli phepha.
Omnye umahluko omkhulu oza kucinga ngawo xa ukhetha idesika ekhwele ngokuchasene nokukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni loluphi uhlobo lwendawo oluza kungena kuyo. Ngenxa yokusetyenziswa ngokusekwe kuphahla lwendlu inkqubo yokhetho incinci.
Izakhiwo zorhwebo zinamathuba amaninzi okuba nophahla olusicaba okanye oluphantsi, kwezi meko isibane esikhanyayo esibhakabhakeni kuya kufuneka.
Kumakhaya anemigangatho ephezulu kwaye apho imbonakalo yangaphandle ibaluleke ngakumbi kumgangatho wesibhakabhaka ophakanyisiweyo uyafuneka. Oku akuthethi ukuba zonke iipropati zorhwebo kunye neendawo zokuhlala zinezi ntlobo zophahla, kodwa apho ngokusekwe kwibala lophahla ziya kugqiba ukuba ukukhanya kwesibhakabhaka kufuneka kubekwe phi.
Inkcazo ethe kratya yohlobo ngalunye lokukhwela isibhakabhaka ngapha ngezantsi.
Isibane esikhanyisiweyo esibhakabhakeni siqhotyoshelwe eluphahleni ngesakhelo somthi. Esi sakhelo somthi sakhiwe macala kuvulwe okusikwe eluphahleni. Isakhelo somthi senza ukuba isibhakabhaka sikhanyise kakhulu, senza isibhakabhaka sikhanye sibonakala ngaphandle.
Ubungakanani besibhakabhaka esikhanyisiweyo esibhakabhakeni sihlala sijikeleze iinyawo ezimbini ziinyawo ezi-6, ngobukhulu besiko obufumaneka ngokukhululeka. Ukuncamathela kubungakanani obuqhelekileyo beenyawo ezi-2 ngeenyawo ezi-6 kwenza kube lula kakhulu ukubuyisela endaweni yakho ukuba khe kwakho naziphi na iingxaki esibhakabhakeni sakho.
Isibane esibhakabhakeni sihleli ngaphezulu kwesakhelo somthi (isinqandi) esifana nendlela isiciko esihambelana ngayo nebhokisi yezihlangu, emva koko sibethelelwe emacaleni kwaye sikhanyise ngaphezulu. Ezinye izibane ezibengezelayo ezikhanyisiweyo zenziwe kwangaphambili kwaye kubalulekile ukuba kuqinisekiswe ukuba ziyahlangabezana neemfuno eziyimfuneko ukuhlangabezana neemfuno zalapho.
Izibane ezibengezelayo ezibengezelayo zinokukhanyiswa ngophahla lwe-asphalt, zivuthulule uphahla okanye uphahla lwethayile, kodwa akufuneki ziphinde zigqitywe ukuba ukukhanya kwelanga kuya kufuneka kutshintshwe. Isibane esibhakabhakeni esikhanyisiweyo sesinye sezikhanyiso eziqhelekileyo ezisetyenziswayo.
Izibane ezibengezelayo esibhakabhakeni zihlala zisetyenziselwa uphahla olusicaba okanye uphahla olunemigangatho ephantsi, ngakumbi phantsi kweedigri ezili-14. Ukukhanya kwesibane esibekwe phezulu esibhakabhakeni asifakwanga ubushushu, nto leyo enokubangela ukuba bangabi namandla kangako kunendlela yokukhwela esemgangathweni.
Isibhakabhaka esikhwele isibhakabhaka siqhotyoshelwe eluphahleni ngesikhonkwane ekunene kwitywina eluphahleni ngokwalo. Oku kunika isibhakabhaka isibhakabhaka esezantsi ngenkangeleko ecocekileyo kunye neepropathi zokonga umbane.
Isibhakabhaka esibekwe phezulu esibhakabhakeni lukhetho lwanamhlanje xa kufikwa kwizibhakabhaka. Izibane zelanga ezixhonyiweyo ezinokuhonjiswa zinokukhanyiswa ngophahla oluxutywe, kugungqiswe uphahla, uphahla lwentsimbi kunye nophahla lwethayile.
Ezi zingenziwa ukuba zisebenzise amandla ngakumbi ngeendlela ezithile zokudanyaza, jonga kumenzi wezinto ezithile. Ukudanyaza kukhusela ukukhanya kwesibhakabhaka kunye nendawo engezantsi kwimozulu kubandakanya amanzi kunye namaqondo obushushu angaphandle.
Isibhakabhaka esibekwe phezulu esibhakabhakeni sisetyenziswa kakhulu eluphahleni olunepali esukela kwi-14 ukuya kwi-85 degrees.
Kwiimeko ezininzi akukho khetho oluninzi onokulusebenzisa esibhakabhakeni, njengokuqwalaselwa okukhulu koku ngumgangatho wophahla. Kuphahla lwethala olucekeceke okanye oluphantsi.
Kuphahla oluphezulu oluphezulu olubekwe phezulu kwizibane ezibengezelayo zibhetele. Kulwakhiwo olutsha kunokubanakho ukuguquguquka koluphi uhlobo lokukhanya kwesibhakabhaka ongalusebenzisa ukuba usathetha kulwakhiwo lophahla lwesakhiwo.
Xa kuziwa kwi-aesthetics isibhakabhaka esikhwele esibhakabhakeni lukhetho olungcono ukuba ungazisebenzisa ngokusekwe kuyilo lwakho lwasekhaya. Isibhakabhaka esibekwe esibhakabhakeni sicocekile kwaye sifihlwe ngakumbi ngaphandle kwekhaya.
Zikwanamandla ngakumbi asebenzayo azityhala ngaphezulu komphetho xa kuthelekiswa nonqabiseko olubekiweyo. Izibane ezibengezelayo zedesika zihlala zikhethwa kulwakhiwo olutsha njengoko zibhetele kwezi zimbini xa kukho ukhetho.
Ngelishwa, ukuba nazo zombini iintlobo zezibane zelanga unokuba neziphumo ezibi ezingaqhelekanga kwisithuba. Kuba akukho zigubungelo zefestile esibhakabhakeni, ihlala ikhanya kwiindawo ezifanayo ixesha elide, elinokuthi libangele ukuphela okanye ifanitshala kuloo ndawo.
Ukongeza, ukukhanya kwezulu kunokuqokelela ubushushu obuninzi elangeni ngamaxesha athile okanye kubangele ilitha ukuba ifanitshala ayifakwanga kweyona ndawo ifanelekileyo ngokuthelekiswa nokukhanya kwesibhakabhaka.
Isibhakabhaka esibekwe phezulu esibhakabhakeni sinetoni yeemilo zesiko kunye nobukhulu bokukhetha kuzo ezenza ukuba zilungele ubuhle kunye nokusebenza kwekhaya. Kukho ubungakanani obuqhelekileyo obunokukhethwa kunye nokugcina iindleko ziphantsi.
Ukukhanya kwesibhakabhaka esikhanyisiweyo kubhetele xa kuziwa kwiindawo eziya kufuna ukutshintshwa rhoqo, okanye ukubuyisela isibhakabhaka esidala. Ezi zikwakhona ukhetho olunendleko ngakumbi olunobungakanani obuqhelekileyo, ngelixa ukubekwa kumgangatho ophezulu kunokukhetha okungaphezulu kwesiko.
Yeyiphi eyona nto uyithandayo xa kufikwa kumanqwanqwa aphakanyisiweyo esibhakabhakeni? Sazise apha ngezantsi kwizimvo. Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga kwinqaku lethu malunga isibhakabhaka isibhakabhaka Apha.
igumbi lokulala elinendawo yomlilo
iingoma zothando zalo lonke ixesha
indawo yomlilo yezitena emhlophe
unxibe ntoni emtshatweni wamaHindu
ungayiqasha ilokhwe yomtshato
UMary kate olsen umsesane wokuzibandakanya